I-Plasma 5.24.5 ifika ilungisa iimpazamo ezininzi, ezininzi ze-Wayland | ubunlog
IPablinux | 03/05/2022 13:42 | KDE, Ubuntu
Ndithe ndisongeza umbhalo we IPlasma 5.24.5 kumfanekiso weheader bendicinga ukuba inqaku lesihlanu kwaye liphawula isiphelo somjikelo wobomi boluhlu, kodwa hayi, akunjalo. Ewe luhlaziyo lwesihlanu lokugcinwa, kodwa i-5.24 yi-LTS, leyo isebenzisa Kubuntu 22.04, kwaye iya kuqhubeka ifumana uhlaziyo lwezinye izinto zokupholisha.
Kodwa eyona nto ibalulekileyo apha kukuba iPlasma 5.24.5 ikhutshiwe, kwaye ifikile kunye noluhlu olubalulekileyo lwe-tweak kuthathelwa ingqalelo ukuba uchungechunge lwe-5.24 ekuqaleni kwakucingelwa ukuba luphumelele, kunye neendawo ezine zokugcina sele zikhutshiwe eziye zalungisa imiba emininzi. Kwimeko nayiphi na into, iPlasma 5.24.5 yayicwangciselwe namhlanje, sele ikhutshiwe kwaye ingena olu luhlu lulandelayo ungafunda ezinye zezinto ezintsha.
IPlasma 5.24.4 ifika nokuphuculwa kweWayland, KRunner kunye neKWin, phakathi kwezinye
Yintoni entsha kwiPlasma 5.24.5
Isiqulathi seefayili esinokuthi sivulwe ukubonisa imixholo yeefolda kwidesktop asisacaphukisi iipikseli ezimbini ezimxinwa kakhulu ukubonisa iseli yegridi eyongezelelweyo.
Xa i-Discover ifakela uhlaziyo lweepakethe ezinolwakhiwo oluninzi olukhoyo (umzekelo, i-32-bit kunye ne-64-bit yeenguqulelo, ngenxa yokufakwa kwe-Steam), ngoku ifakela uhlaziyo lwazo zonke izakhiwo endaweni yeseti yazo engacwangciswanga. kubangela iingxaki kwinkqubo yokusebenza.
Kwiseshoni yePlasma Wayland:
Kulungiswe imeko apho isicelo esingaziphathi kakuhle sinokubangela ukuba i-KWin ingqubene.
Ukutshintsha izicwangciso zokubonisa ngeendlela ezithile (umzekelo, ukujikeleza kunye nokuhambisa isiboniso ngaphandle kokutshintsha izinga lokuhlaziya) akusabangeli ngamanye amaxesha ukuba iKWin ingqubene.
Xa iwindow icela usetyenziso isebenzisa iprothokholi esemthethweni yeWayland ukuze izise eyakhe iwindow, kodwa oku kwaliwe yiKWin nangasiphi na isizathu, i icon yoMphathi woMsebenzi wefestile ngoku isebenzisa umbala orenji ongasemva "ifuna ukuhoywa", njengakwi X11 .
Kulungiswe imeko apho i-KWin inokungqubana ngelixa isikrini sitshixiwe.
Ukuvula isikrini akusabangeli iingxaki ezahlukeneyo ezibonakalayo kuyo yonke indawo.
Ukuvula imisebenzi yoMphathi woMsebenzi ngeMeta+[inombolo] indlela emfutshane yebhodi yezitshixo ngoku ihlala isenza oko kulindelekileyo, nokuba mingaphi imisebenzi ehleliweyo onayo kwaye igqityelwe ukufikelelwa nge mouse okanye ibhodi yezitshixo.
Umgaqo wefestile ye-KWin "IiDesktop eziNgqongileyo" ngoku isebenza ngokuchanekileyo.
Kwiseshoni yePlasma Wayland, ii-apps ze-SDL azisaphazamiseki xa umboniso wangaphandle ukhutshiwe.
I-KWin ayisayi kuntlitheka xa iimonitha ze-USB-C eziqhagamshelwe zivuka kwiindawo zazo zokugcina amandla.
Iwijethi yeMenu yeHlabathi ngoku isebenza ngokuchanekileyo xa iyimowudi ethi "yiba yimenyu yehamburger" ehlala isetyenziselwa iiphaneli ezithe nkqo ivuliwe.
Ukufumanisa akusayi kuphazamiseka rhoqo, nokuba kukuqalisa okanye xa undwendwela Iphepha eliFakelweyo, ukuba une-backend yeFlatpak enikwe amandla ngeentlobo ezithile zemiyalelo yeFlatpak.
Kwiseshini ye-X11 Plasma, yalungisa imeko apho i-KWin inokuphahlazeka xa isiciko se-laptop sivaliwe ngelixa isiboniso sangaphandle sixhunyiwe.
Iwijethi yeComics iyasebenza kwakhona.
Kwiphepha leNkqubo eKhawulezayo, iqhosha elithi "Tshintsha iphepha lodonga..." ngoku liyasebenza xa unoMsebenzi ongaphezulu kwesinye.
Uphendla kwi KRunner, kumqalisi wesicelo, kujongo lwangaphezulu (okanye kulo naluphi na olunye uphendlo oluqhutywa yi KRunner) ngoku ibuyisela iimatshisi ezizifayile ezibhaliweyo, okanye esebenzisa ifomati yefayile efumana ilifa kwifomati yokubhaliweyo engenanto.
Ukuvala iWidget Explorer sidebar ngoku kuyayicoca, ukugcina imemori ethile kunye nokulungisa ibug apho umbuzo wokukhangela wangaphambili wawukhunjulwe ngokungafanelekanga kwixesha elizayo xa uvulwa.
Iwijethi yebhetri ngoku ihlala ivela kwi-tray yenkqubo ekungeneni, endaweni yokuba ngamanye amaxesha ilahleke de iPlasma iphinde iqaliswe ngesandla.
Ezinye iimonitha azisavuli rhoqo kwiluphu xa ziqhagamshelwe.
Nabani na unokutshintsha izinto abazithandayo kwi-Kickoff kunye ne-Kicker kwaye olo tshintsho luqhubeke emva kokuqalisa kwakhona iPlasma okanye ikhompyuter.
Emva kokufaka i-Flatpak app usebenzisa i-Discover, akusekho qhosha "Faka" apho.
I-Plasma ayisahleki ngokungenamkhethe xa unesicelo esingaphezulu kwesinye esineefestile ezininzi ezivulekileyo kwaye unxibelelane nenye yeengcebiso zoMphathi woMsebenzi.
Iwijethi yemenyu yehlabathi ayisabonisi iimenyu eziphawulwe njengefihliweyo yi-app, njengemenyu ka-Kolourpaint "yeZixhobo".
Ukukhutshwa kwePlasma 5.24.5 yenziwe ngokusemthethweni kwimizuzu embalwa edlulileyo, kwaye iya kufika ngokukhawuleza kwi-KDE neon kunye ne-Kubuntu 22.04.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Iidesika » KDE » IPlasma 5.24.5 ifika ilungisa iibhugi ezininzi, phakathi kwazo kukho ezininzi zeWayland
IFirefox 100 ifika ne-GTK entsha yokuskrola kunye nophuculo lwePiP, phakathi kwabanye
I-Kdenlive 22.04 ifika ngenkxaso esemthethweni ye-Apple M1 kunye nombala wokuqala we-10bit